Xassan Sheekh Maxamuud oo qorsheynaya in ciidamo Itoobiyaan ah uu Kismaaayo u diroKenyana amar kusiiyo in ay ciidamadooda dalka si dhaqsa ah u gala baxaan. - iftineducation.com
iftineducation.com – Madaxweynaha Jamhuuriyada Soomaaliya Xassan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ku howlanyahay qaabkii uu arinta Kismaayo ee faraha kabaxday uu u xasilin lahaa iyada oo aysan dhicin wax rabshada ah.
Kadib markii dowlada Kenya oo ciidamo badan Soomaaliya ay kajoogaan, gaar ahaan Magaalada Kismaayo iyo hareereheeda ay si aan gabasho laheyn u muujisay taageeradeeda maleeshiyada Raaskanbooni ayaa madaxweyne Xassan Sheekh Waxa uu latashiyo labilaabay lataliyaashiisa xagga siyaasada iyada oo leesla soo qaaday in si nabarkaasi loo daweeyo Kenya lagu amro in ciidamdeeda ay kala baxdo gayiga Soomaaliya.
Waxaa kale oo leesla soo hadal qaaday in hadii Kenya ciidamdeeda labaxdo ay meeshaasi kasoo bixi karto marnaan xagga awooda ah ooba ay suuragal tahay in Axmad madoobe uu mar kale Shabaab ku biiro si taasi looga badbaadana Ciidamo Itoobiyaan ah loo diro si amaanka iyo kala danbeynta ay usoo celiyaan.
Arintaan ayaa lafilayaa in madxweynuhu uu si dhaqsa ah uu ugu dhawaaqo sida ay xaqiijinayaan ila wareedyo madaxtooyada kusugan oo arinta sheeda kala socday.
Dowlada Itoobiya ayaa lasheegay in ay aad ugu qanacsantahay in dowlada Soomaaliya ay u xilsaarto Kismaayo iyo hareeraheeda madaamna Kismaayo ay leeahay Dekad caalami ah Itoobiyana ay dekad la’aan heyso.
Lamaane ka quustay caruur oo laba mataana ah ay u dhashen iyaga oo gaboobay (DAAWO SAWIRRADA).